I-Banana House: Amagumbi Amabili e-B&B - I-Airbnb
I-Banana House: Amagumbi Amabili e-B&B
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Monika
Yakha ngokwethu, njengoba nathi sihlala endlini ye-Banana House, amakamelo ethu anobuhle bendlu yangasese, enikeza ikhishi elihle, i-yoga yansuku zonke nendawo yokubhukuda. Ukudla okungokwemvelo okuhle kakhulu. Siyakwamukela ngekhaya elenziwe ngejusi entsha.
Sinamakamelo amabili angu-5 atholakalayo
Igumbi lakho linokufinyelela okuqondile egumbini elikhulu lokuphumula nelokudlela. Inamabhentshi antofontofo kanye nombhede ojingayo, ukubukeka okuhle engadini.
Sizokukwamukela esikhumulweni sezindiza futhi ukaputeni wethu wesikebhe uzokuletha endlini yethu. Izindleko zokudlulisa azifakwanga esilinganisweni
Igumbi lakho linokufinyelela okuqondile egumbini elikhulu lokuphumula nelokudlela. In…
4.74 (izibuyekezo ezingu-28)
I-Shela iyidolobhana elihle elinokuthula elinabantu abangu-3000 kuphela, siphila imizuzu engu-5 sihamba ngasemanzini ukuya ebhishi elikhulu elingamakhilomitha angu-12 ubude elingcolile. Sizungezwe izingadi futhi sinezindawo ezinhle zokubukwa, ngakho-ke uzizwa ukhululekile ngokushesha lapho ungena endlini yethu.
Sizokwamukela wena siqu, sihlala endlini futhi sihlezi sitholakala nganoma yikuphi ukusikisela nemibuzo ongase ube nayo.